Ọgbaghara COVID-19 na-eme ihe ike gbasaa site na Guadeloupe ruo Martinique
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Martinique Breaking » Ọgbaghara COVID-19 na-eme ihe ike gbasaa site na Guadeloupe ruo Martinique
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Crime • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ Martinique Breaking • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ndị egwu egwu were iwe na anabataghị gọvanọ Martinique na ngwụcha ụbọchị mbụ ha mere ngagharị iwe.
Ternyaahụ, ndị otu azụmaahịa 17 nọ n'agwaetiti Martinique nke France kpọrọ oku ka a kwụsị ọrụ izugbe iji gosipụta mmegide ha na iwu mgbochi mgbochi COVID-19 maka ndị ọrụ ahụike na ntinye akwụkwọ ikike ngafe ahụike coronavirus France.
Mana ngagharị iwe ghọrọ ngwa ngwa Guadeloupọgba aghara ime ihe ike e-style nwere akụkọ gbasara ndị uwe ojii na ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na MartiniqueIsi obodo Fort-de-France na-abịa n'okpuru egbe.
Ọnọdụ a gbagoro mgbe a kọrọ na iwe were ndị a tụrụ egwu na ha anabataghị gọvanọ Martinique na ngwụcha ụbọchị mbụ ha mere ngagharị iwe.
Ọ bụ ezie na a kọwabeghị mmerụ ahụ, ndị mmanye iwu na ndị ọrụ enyemaka mberede bụ ndị mmanye iwu na-agba ọsọ ugboro ugboro ka ha na-etinye aka na-agbanyụ ọkụ n'okporo ụzọ ọha na eze na obodo Fort-de-France n'abalị ụnyaahụ.
Dabere na MartiniqueOnye nkwuchite ọnụ na-ahụ maka nchekwa ọha bụ Joël Larcher, ndị ọrụ uwe ojii na ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ ka agbanyere ọtụtụ ụgbọ ala n'oge ọgba aghara abalị.
Ndị ọgba aghara egbochila okporo ụzọ dị n'akụkụ agwaetiti Caribbean nke France ma mee ọtụtụ ihe gọọmentị chọrọ, gụnyere njedebe nke iwu ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 maka ndị na-elekọta ya, yana arịrịọ ka ukwuu dị ka mmụba nke ụgwọ ọnwa na mbelata ọnụ ahịa mmanụ.
Ime ihe ike Martinique agbasala site na nso Guadeloupe, ebe ọgba aghara gbadara mgbe otu ndị ọrụ haziri njem njem n'izu gara aga iji maa mmachi COVID-19 ebe ahụ, gụnyere iwebata mmachi mgbochi coronavirus jabs maka ndị ọrụ ahụike.